Poly-tunnels are simple structures to protect crops during cultivation, improve yields, and extend the growing seasons. Fresh Studio conducted an assessment on the opportunities for the use of poly-tunnels in vegetable production in Southern Shan State. The study was commissioned by #GIZBusiness on behalf of the #German_Government. During the webinar, Fresh Studio will present the key findings of the study followed by questions and answers.
If you are interested in this topic, please register your participation from the link below:
Time: 1P.M - 3P.M
Mode: Online through Zoom App
လား ရှိုး စက်တင်ဘာ-၂၆
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးနေလင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည်စက်တင်ဘာ(၂၆) ရက် နံနက်ပိုင်းက လားရှိုးမြို့နမ့်မော်ဖာကျောင်းတိုက်သို့သွားရောက်ကာ နမ့်မော်ဖာကျောင်းတိုက်ရှိကျောက်တောင်၌ ဘုရားရုပ်ပွားတော်များဆစ်ထုနိုင်ရန် ဆရာတော်သံဃတော်များမှ ဘုရားအနေကဇာတင်နေမှုကို တက်ရောက်၍ နမ့်မော်ဖာကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အားရှိခိုးကန်တော့ကာငါးပါး သီလဆောက်တည်ကြပြီးလှူဖွယ်ဝထ္ထု ပစ္စည်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသောအလှူငွေကျပ်သိန်း(၂၀) ကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ လှူဒါန်းပေးပြီးအမျှအတန်းပေးကြသည်။
ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည်လားရှိုးခရိုင် ကျောက်မဲခရိုင်အတွင်းရှိမြို့နယ် များတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသောCovid-19 ရောဂါကျန်းမားရေးစစ်ဆေးဂိတ်အား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူစစ်ဆေးပြီး ဌာနပေါင်းစုံမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ၊ ကြက်ခြေနီဝန်ထမ်းများ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ အတွက် လိုအပ်သည့်နေရာတွင်အသုံး ပြုနိုင်ရန်ထောက်ပံ့ငွေကျပ်(၃)သိန်း ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။